Alahady fahaefatra amin’ny Karemy – 15/03/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky faharoan’ny Tantara (2 Tant. 36, 14-16. 19-23)
Nihatra tamin’ny vahoaka ny fahatezeran’Andriamanitra sy ny famindram-pony, fony izy babo ary afaka avy eo.
Tamin’izany andro izany, ny lehiben’ny mpisorona rehetra mbamin’ny vahoaka koa nandroso nanao fahadisoana manaraka ny fahavetavetan’ny firenena, sy nandoto ny Tranon’ny Tompo, izay efa nohamasininy, tao Jerosalema. Malaky sady matetika nonampitondra teny fananarana tany amin’izy ireo, ny Tompo Andriamanitry ny razany, tamin’ny alalan’ny irany, fa nangoraka ny vahoaka sy ny Fonenany Izy. Kanjo nihomehezan’izy ireo ny irak’Andriamanitra, notsiratsirainy ny teniny, ary novazivazîny ny mpaminaniny, mandra-pihatry ny fahatezeran’Andriamanitra tamin’ny vahoakany tsy azo notohaina intsony. Nodorany ny Tranon’Andriamanitra, noravany ny mandan’i Jerosalema, notselarany afo ny lapa rehetra teo, ary nosimbany ny fanaka saro-bidy rehetra. Nentin’i Nabokôdônôzôra ho babo tany Babilôna ny olona sisa tsy matin-tsabatra, ka tonga mpanompon’izy sy ny zanany ireny, mandra-panjakan’ny mpanjakan’i Persa. Izany no nahatanterahan’ny tenin’ny Tompo, tamin’ny vavan’i Jeremia hoe: “Mandra-pahazon’ny tany ny onitry ny sabatany, dia hitsahatra izy mandritra ny fotoana nahafoana azy, dia mandra-pahafenon’ny fitopolo taona”.Ary tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Sirosa, mpanjakan’i Persa, dia namporisihin’ny Tompo ny fanahin’i Sirosa mpanjakan’i Persa mba hahatanteraka ny tenin’ny Tompo tamin’ny vavan’i Jeremia, ka nasainy natao kabary sy nolazaina an-tsoratra hiely eran’ny fanjakany izao teny izao: “Izao no lazain’i Sirosa mpanjakan’i Persa: Efa nomen’ny Tompo Andriamanitry ny lanitra ahy ny fanjakana rehetra eto an-tany: ary efa nandidy ahy Izy, hanao trano ho Azy any Jerosalema. Koa iza avy moa aminareo no vahoakany ? Homba azy anie Andriamanitra Tompony ary aoka hiakatra izy”.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez. 2, 4 -10)
Na dia fony mbola matin’ny fahotana aza ianareo, dia ny fahasoavana no namonjena anareo.
Ry kristianina havana, Andriamanitra izay manankarena amin’ny famindram-po, noho ny halehiben’ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin’ny fahotana aza isika, no nahavelona antsika niaraka tamin’i Kristy (fahasoavana no namonjena anareo); niara-natsangany isika, sy niara-napetrany amin’i Jesoa Kristy any an-danitra, mba hanehoany amin’ny andro ho avy ny haben’ny harem-pahasoavany, amin’ny hatsaram-pony amintsika ao amin’i Kristy Jesoa. Satria ny fahasoavana no namonjena anareo, noho ny finoana, ka tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriarnanitra, tsy avy amin’ny asa, fandrao misy mirehareha. Fa asany isika, ary zava-bao nataony tao amin’i Kristy Jesoa, mba ho amin’ny asa soa voaomany rahateo hataontsika.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 3, 14-21)
Naniraka ny Zanany mba hamonjy an’izao tontolo izao Andriamanitra.
Tamin’izany andro izany i Jesoa niteny tamin’i Nikôdema nanao hoe: “Tahaka ny nanandratan’i Môizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’Olona koa, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay”. Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mina Azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin’izao tontolo izao, mba hitsara an’izao tontolo izao, fa mba hamonjy an’izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy tsaraina; fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny Anaran’ny Zanak’Andriarnanitra tokana. Ary izao no fitsarana: tonga amin’izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon’ny olona ny haizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana, ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miharihary ny asany; fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana, mba hiharihary ny asany, fa atao amin’Andriamanitra.
Alahady 31/01/2016 : Tenin’Andriamanitra